राहेम स्टर्लिंग बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू राहेम स्टर्लिंग बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'Whizzkid'। हाम्रो राहेम स्टर्लिंग बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड लाइब्रेरी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु पुरा खातामा ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनीहरूको क्षमताको बारेमा जान्दछन् तर कमेन्टले हाम्रो राहाम स्टर्लिंग जीवनीलाई विचार गरेको छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu को बिना, सुरु गर्न।
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
Raheem Sterling बचपन फोटो
राहेम शुक्ले स्टर्लिंग डिसेम्बरको 8th डिसेम्बर, किंग्स्टन मा 1994, जमैका एक अपेक्षाकृत अज्ञात पिता र आमा, श्रीमती नडिन स्टर्लिंग द्वारा जन्मिएको थियो। उनको जन्म उनको जन्मको समयमा उपलब्ध थिएन। राहेमको जन्म प्रमाणपत्र नामहरू कुनै पिता छैन। उनको उपनाम नै Nadine को पछिल्लो साथी एरोल स्टर्लिंग देखि आउछ।
फुटबलमा सबैभन्दा भयंकर डरलाग्दो व्यक्तिले उनको यात्रा लगभग 5,000 मील दूर किंग्स्टन, जमैका को एक कुख्यात खतरनाक जिल्लामा सुरु भयो, जहाँ उनी आफ्नो बचपनको समयमा बस्थे।
यो Maverley, जमैका मा आफ्नो शुरुवात देखि एक लामो बाटो हो - एक समुदाय जो ग्रुप द्वारा नियन्त्रित क्षेत्रहरु संग एक समुदाय। यो छ 'पुरा टापुमा सबै भन्दा बाहिरी क्षेत्रहरु मध्ये एक'एक जमैकन पत्रकारको अनुसार। 'यसले मार्जिन बस्ती समुदायहरू आधारभूत सुविधाहरूको कमी र बन्दूक अपराध नियन्त्रण गर्न संघर्ष गर्न समावेश गर्दछ।' राहीमले बच्चाको रूपमा दिनहुँ आठ घण्टासम्म खेलिरहेको थियो, जब उनले बन्दूकको आवाज सुने भने - दंगाको चिन्ह।
छ वर्षको उमेरमा, स्टर्लिंग ब्रिटेनमा आभारी भयो र लन्डनको सबैभन्दा कठिन सम्पति मध्ये एक मा आफ्नो माम बसे। उनको उल्लेखनीय कथा भनेको आमाबाबु, विद्यालय र फुटबल क्लबहरूले पनि सबै भन्दा कठिन परिस्थितिहरूमा सफलतामा खेलकुद प्रतिभालाई कसरी बदल्न सम्भव छ भनेर एक गौरवशाली उदाहरण हो।
राहेम स्टर्लिंग को माईन्ट, क्रिस
क्रिस Beschi अनुसार, वर्नन हाउस स्पेशल स्कूल मा उनको शिक्षक, "यो उनको चरित्र को चरित्र र उनको वरपर समर्थन प्रणाली को लागि गवाही हो जसले उसलाई आफ्नो सपना पूरा गर्न को लागि"
वेरोन हाउस स्पेशल स्कूलमा उपस्थित हुनुभन्दा पहिले, राहेमले धेरै पटक स्कूलहरू परिवर्तन गरे। "तिनी वर्नन हाउसमा आए किनभने उनी आफ्नो व्यवहारमा मुख्यधारा प्राथमिक विद्यालयमा समस्या भइरहेको थियो" Beschi भन्यो। 'उहाँ निश्चित रूपमा बच्चा हुनुहुन्थ्यो जुन उनको बारेमा एक दयालु र निर्दोष जुनून थियो। उनीहरूको खुसी स्वभाव थियो जुन कहिलेकाहीं क्रोधमा टिप्न सक्थे। '
Beschi थपियो: 'म सम्झन्छु एक 10-वर्ष-उमेरको रूपमा, "जब तपाईं 17 भएको बेला तपाईं या त इङ्गल्याण्डको लागि खेल्नुहुने तरिकाले तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईं जेलमा रहनुहुनेछ।" यो भन्न को लागी एक कठोर कुरा थियो र मलाई लाग्छ कि यो उनको लागि एक निश्चित क्षण थियो, तर म निश्चित रूपमा महसुस गर्थे यो सही थियो। त्यहाँ उनको लागि मध्य मैदान जाँदै थिएन। उहाँ कुनै मेनु वा मजदुरको रूपमा काम गर्ने केही मान्छे हुनुहुन्न। उहाँ सधैँ उल्लेखनीय हुनुहुन्थ्यो।
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: क्यारियर सुरु
स्टर्लिंग सानो केटा थियो जसले आफ्नो भविष्यलाई समेत उनको बचपनको बेला परेशान युवाहरु संग बिताए जस्तो देख्यो। यद्यपि Beschi परमेश्वरले आफ्नो जीवनलाई पठाउनुभयो। उनी हरेक हप्तामा, एक व्यापारिक सम्पदामा स्टर्लिंगसँग मील हिंड्ने इमारत साइटको तस्वीरहरू लिने गर्थे जुन पछि ग्रेट ब्रिटेनमा फुटबल सबैभन्दा लोकप्रिय मैदान थियो।
यो प्रत्याशित भन्दा लामो समय लागे तर, स्टर्लिंगको आँखा भन्दा पहिले, नयाँ वेम्ले स्टेडियम पूरा भएको थियो। काव्य आर्क आफ्नो जूनियर च्याम्पियन क्यारियरमा ब्याकड्रप भए, उनीहरूले घरबाट हेर्दा नेसनेड, सेन्ट रेफेलको सम्पत्ति, उत्तर-पश्चिम लन्डनमा। स्टर्लिंगले एउटा ठूलो निर्णय गर्यो जुन क्या क्यारियर सुरूवातको एक मोड हो। उनले कोप्लान हाई स्कूल खेल्ने मैदानमा नजिकको नयाँ साथीसँग फुटबल खेल्नका लागि ग्याङ्गलाई पराजित गर्ने निर्णय गरे जुन नजिकैको वेम्बले नजिकै छ।
राहेम स्टर्लिंग जीवनी
जब त्यो केवल 10 थियो, स्टर्लिंगले स्कूलमा दुई घन्टा फुटबल खेल्नुभयो। एक स्रोत अनुसार, 'राहेम स्टर्लिंग एक बच्चाको रूपमा मात्र कुपोषण थिएन। उनी जान्दथे, कसरी बित्नुभयो र पछि कसरी जान्छ भनेर, आफ्नो उमेरको बच्चाको लागि अविश्वसनीय थियो। उनी फुटबल पिच र यस मार्फत अवधारणाहरू पाउनेछन्। उनको ठूलो काम नैतिकता थियो जुन अन्य धेरै बच्चाहरु थिएनन्। '
स्टर्लिंगले अल्फा र ओमेगा युवा फुटबल क्लबको लागि शाम र सप्ताहांतका लागि उनको अनौठो प्रतिभा प्रदर्शन गर्यो। QPR ले उसलाई उत्कृष्टताको केन्द्रमा भर्ना गर्नु अघि लामो समय लागेन।
'त्यो टोलीमा राम्रो र खराब थियो,' क्यूपीआर अकादमी निर्देशक स्टीव गैलेनले भने। 'राम्रो थियो राहेम र खराब खराब थियो टोलीको। एक खेल 6-5 समाप्त हुनेछ र राहेमले पाँच गोल गरे र बाहिरी छैन्। ' स्टीव गैलेन थपियो। उसले उपनाम प्राप्त गर्यो "राहेम पार्क रेंजर्स", यसको आफ्नै मा मेल जित्ने क्षमताको कारण।
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: लिभरपूल अधिग्रहण
'म उसलाई राख्न पागल लाग्यो जस्तो लाग्थ्यो र मलाई मनमोहक थियो कि त्यो जाँदै थिएन,' गैलेनले भने, 'म उनको साथ र उनको आमा, एक प्यारी महिला हो जो धेरै नजिक थिए। तर केही समयमा, सबैले डराए, त्यो चाँडै ठूलो क्लबमा बेचेको थियो।
मैनचेस्टर सिटी र चेल्सी, शस्त्रागार र लिभरपूल सबै चारैतिर उनको शार्क जस्तै चल्थ्यो। तर अन्तमा, लिभरपूलले 15 वर्षको एक पाउन्ड एक्सएनएमक्सएक्समिनेल सम्झौतामा सुरक्षित गर्न सफल भयो। उनले लन्डनलाई आफ्नो आमाबाबुसँग मिर्सीडाइडमा छोडे। लिभरपूलमा हुँदा, उनले आफ्नो शिक्षा रिनहिल स्कूलमा सेन्ट हिलन्समा जारी राखे। उनी फुटबल र अध्ययन दुवै जोड्न सक्षम थिए। तपाईं र म दुवै जान्दछु त्यो लिभरपूल मा उत्तेजित।
कैसे Raheem स्टर्लिंग गुलाब को प्रसिद्धि
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पारिवारिक जीवन
राहेम स्टर्लिंग पारिवारिक जीवन एक ईर्ष्या, आशा, सहनशीलता र अन्तिम सफलता संग भरिएको छ। अब हामी तपाईंलाई राहीम स्टर्लिङ्गको परिवारका सदस्यहरूको बारेमा एक विवरण दिन्छौं।
फेथर: उनको अनुपस्थित बुबा जमैकाको क्यान्सरमा मृत्यु भएको थियो जब स्टर्लिंग नौ वर्षको थियो। आज सम्म, स्टर्लिंग अब सम्म उनको परिवार त्रासदी द्वारा परेशान भएको छ। उनको पिता किंग्स्टन, जमैका मा आफ्नो पिता को घर बाहिर मृत भेटिन्छ - गिरोह को बन्दूक हिंसा देखि एक शहर। तल एउटा मृत्यु हो जुन उनको मृत्युको दृश्य देखाइएको छ।
राहेम स्टर्लिंग बुबाको मृत्यु - पूर्ण कथा
एउटा परिवारले यस्तो लेखे: "तिनका बुबाले तिनलाई मायालु प्रेम गर्थे। मृत्यु रह्यो राईम विनाश भयो र तिनको परिवार लामो समयसम्म संघर्ष गर्न आशंका भयो। "
निस्सन्देह, आफ्नो पिताको मृत्यु एक त्रासदी थियो जसले उनको बचपनको जीवनमा गहिरो प्रकरणलाई संकेत गर्यो।
मातृभाषा: राहेम स्टर्लिंग आमा एक थियो पूर्व-बालिका जसले पछि आफ्नो काम छोडेपछि उनको छोराले लिम्बुले बनायो। Nadine Clarke Sterling ले आफ्नो पुर्खा स्टर्लिंग लगभग एक-हातमा उठाएर उनको गर्वलाई स्पष्ट पारे।
राहेम स्टर्लिंग मातृ - नडिन क्लार्क
उनले एक पटक उनको फेसबुक पेजमा लेखे: "खुसी मेरो पिताको दिन। म एक आमा र एक पिता हुँ। "
Nadine Clarke Sterling उनको राह र उनको क्यारियरको लागि एक बेहतर जीवन निर्माण गर्न राहेमलाई लन्डनमा लैजान थालेको थियो। तपाईं पहिले पहिलो इङ्गल्याण्डलाई धन्यवाद दिनुभयो र राहाम लिन सक्नुहुन्न। उनले आफ्ना नातेदारहरूलाई तिनको हेरचाह गर्न अनुमति दिनुभयो जब उनी इंग्ल्यान्डमा हुन्थे तब उनी आफ्नो छोराको आगमनको लागि तयारीमा थिए।
सम्बन्धितहरू: राहेम स्टर्लिंगको बुबाको मृत्युपछि उनको पुरानो सौन्दर्य बहिनी लेकिमाले उनलाई आक्रमणकारीहरूबाट महिनाको लागि छुट्याउन खोजे। इङ्गल्याण्डको लागि प्रस्थान गर्नु अघि, राहीमले आफ्नो आमाको बहनलाई ग्रिन जय मोरिस भनिन्, जो पछि क्यानडामा गए।
स्टर्लिंगका नातेदारहरू तिनलाई फुटबल किन्न धेरै गरीब थिए - त्यसैले उनीहरूको घरमा उनको पहिलो किकबाउट्स बलको बट्टा जुस कार्टनसँग थिए।
उनको चाची अनुसार: "उनको जीवन सजिलो छैन। यो बढ्नको लागी एक कठिन ठाउँ थियो। त्यो बच्चाको रूपमा धेरै तीव्र थियो। हामी धेरै पैसा थिएनन् तर हामी एक अत्यन्त नजिकको परिवार हौं जसले राईमलाई बढाएर एकअर्कालाई सहयोग गर्यो। फुटबलको लागि उनको माया तीन वर्षपछि आफ्नो विगतका बुबाको घरको सामने खेलिरहेका थिए। फुटबल स्पष्ट रूपमा उनको ठूलो प्रेम थियो। यही कारणले गर्दा उनको माम दिन र रात्रिलाई ठुलो बनाइयो किनकि उसले उनीहरूलाई इङ्गल्याण्डमा पुग्यो। "
राहेमको विस्तारित परिवारले उनीमाथि विश्वास गरेको बेला उनी इङ्गल्याण्डका लागि छोडेनन्। तिनीहरूले उहाँसँग कुराकानी गरेपछि उनी आफ्नो क्यारियरसँग प्रगति गरे। उहाँले तिनीहरूलाई त्याग्नु भयो। तिनीहरू कहिले उत्साहित थिए ब्रेंडन रोडर्स उसलाई प्रसिद्धि बढाउने अवसर दिनुभयो। यो एक क्षण थियो जुन तलका चित्रमा देखेर उनीहरूको अनुहारमा मुस्कुराए। राहेमले आफ्नो विस्तारित परिवारको आर्थिक रूपले आर्थिक रूपमा सहयोग गरेको छ। तिनीहरू सबैले आफ्नो छनौटको विभिन्न देशहरूमा जमैका छोडे। तल उनको विस्तारित परिवार र उनको मामि को चित्र हो।
Raheem Sterling परिवार फोटो
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: सम्बन्ध जीवन
राहेम स्टर्लिंगको पहिले नै दुई जना एक जना छन्। उनको पहिलो बच्चा र छोरी, मेलोडी गुलाब एक सानो सम्बन्ध पछि 2012 मा जन्मिएको थियो।
स्ट्रिङले आफ्नो प्यारी र मोडल Paige Milian ले हालसम्म QPR मा। स्टर्लिंगको लिभपोलमा जानुअघि उनी दुवैको पहिलो बच्चा, मेलोडी गुलाब थियो।
राहेम स्टर्लिंग गर्लफ्रेंड, Paige मिलन - अनल्ट स्टोरी
फेरि, लिभरपूलमा उनको सावधानी अघि, तिनीहरू एक विभाजित थियो तर इङ्गल्याण्ड एकता जब लिभरपूल जान गए पछि एकैसाथ एकै ठाउँमा गयो।
लामो समयको प्रेमिका र मोडेल Paige Milian सँग पनि Thiago भनिन्छ एक छोरा थियो जो माचेस्टर मा जन्मिएको थियो जहाँ उनको बुबा आफ्नो फुटबल खेल्छ।
क्यारिंग राहेम चाँद भन्दा माथि थियो र सबै जवानी थिए जब उनले आफ्नो पहिलो पुत्रको सुरक्षित आगमन देखे। उहाँ जन्मेको माध्यमबाट सबै तरिकाहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र श्रमको माध्यमबाट Paige मदत गर्नुभयो।
राहेम स्टर्लिंग बेटा, थियगो स्टर्लिंग
कसैलाई निश्चित छैन कि बच्चा थियागो भनिन्छ किनकि यो परिवारको नाम होइन तर एक स्रोत अनुसार, यो केवल एक नाम हो कि रायम र Paige दुवै को आवाज मन परायो।
राहेम स्टर्लिंग स्वाभाविक रूपमा बच्चाछोरीलाई माया गर्छ। उसले वास्तवमा उनको अनुहार जो आफ्नो छोरी र भतिजी संग उत्तम गुणवत्ता समय खर्च गर्न मनपर्छ।
राहेम स्टर्लिंग बेटी, मेलोडी (दाँया) र भतिजी (बाँया)
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उनको स्त्रीलाई अस्वीकार गर्दै
राहेम स्टर्लिंगले गर्लफ्रेंडलाई अस्वीकार गर्दछ
जब स्टर्लिङ्ग 22 बदल्यो, Paige ले एक जोडी को एक तस्वीर साझा गरे एक सिंहासन मा बैठे कैप्शन संग: "मुबारक हो 22nd मेरो HUSBAND को जन्मदिन तपाईं प्यार लाखों @sterling7।"
इङ्गल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रियले दयालु जवाफ दिए, तर सुझाव दिएका छन् कि यो पनि आफ्नो टिप्पणी संग एक निजी मजाक हुन सक्छ: "जेजे मैले अब शीर्षक पाएको हुँ यहा तिमी मलाई पत्नीलाई माया गर्दछौ।"
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: दावी र धोखाधारी
राहीम स्टर्लिंगले एक पटक एक 18 वर्षकी केटीलाई आफ्नो £ 1million जमैकन घरबाट बाहिर निस्क्यो कि उनको प्रेमिकासँग उनको सम्बन्ध छ 'केही गम्भीर छैन'एक स्रोतले भन्यो।
उनले एलिस वगास्टाफ र तिनको बहिनी एलेन आफ्नो क्यारिबियन छिपाईंको छेउमा खसेका थिए र उनको प्रेमिका पेइजेज हंसलले क्रेटेमा छुट्टै छुट्टीमा थिए। जोडा पोस्ट गरिएका चित्रहरूमा जुन नगद, एक निजी विमान, सुपरकर्सको बेइजिङ र बिशेषको आनन्द लिंदा उनीहरूले पोखराको छेउमा लुगा लगाउँछन्।
Raheem Sterling Affair
त्यसोभए उनीहरु आफुले आफुलाई बिहे गरेकी छिन्। उहाँले आफ्नो पाउन्ड 180,000-हप्तामा पैसा छुटाउनुहुन्छ।
यसबाहेक, यस प्रकारको रूपमा, पृष्ठले ग्रीसमा मात्र जन्मदिनको जन्मदिन मनाएको थियो। एक स्रोतका अनुसार- 'रहिम लामा थियो र जमैका त्यो छुट्टीमा क्रेटेमा थियो। उनीहरु राहेम को मतलब वास्तव मा सोचना चाहिए जब त्यो अर्को केटी को प्रभावित गर्न को लागी धेरै खर्च गर्न सक्छ, स्रोतले भन्यो।
स्रोतले पनि प्रकट गरेको छ कि एक छ 'रसायन विज्ञान'केही समयका लागि एलिस र स्टर्लिंगको बीचमा, तर उनीहरूले' हातमा लम्बाई 'राखेका छन्। यो जीवनशैली यसको जस्तै छ करीम बेंजमा, रयान गिग्स, एडिंसन काभनी, Cesc Fabregas र एंथोनी मार्शल। जीवन शैली बाट धेरै फरक छ रोबर्टो फर्मिनो, Alex Oxlade Chamberain, मार्कस राशफोर्ड र डेविड जप्पासास्टा.
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: टैटू तथ्याङ्कहरू
Raheem स्टर्लिंग टैटू तथ्य
तिनको हात ट्याटुले उसलाई मार्फत उनको ल्याउन आफ्नो भूमिकाको लागि आफ्नो आमाको श्रद्धांजलि दिन्छ
परेशान बचपन। बिसप डिजाइन पढ्छ: "तपाईंलाई नौ महिनाको लागी आमालाई सबै दुख र दुखाइको माध्यमबाट आमाले धन्यवाद।"
अर्को टैटूले उनको प्रियको चित्र देखाउँछ
छोरी मेलोडी, जो आफ्नो बचपन गर्लफ्रेंडको साथ छोटो छोरो पछि जन्मेका थिए।
पश्चिम लन्डन मा उनको बचपनको समय बाट उनको प्रदर्शन को एक अन्य टैटू।
राहेमको हातमा एक एनएनएनएक्सएक्स-एभरेष्ट केटाको तस्वीर छ जसमा आश्चर्यजनक छ कि वेम्बले स्टेडियमको प्रसिद्ध आर्क मा, यसो भन्छ: "यो विम्बले आज भएको के हो हेर्नको लागि सपना हो। मैले खडा गरें र आफ्नो बच्चा को रूप मा थोडा केटा को रूप मा देखो। म सधैं चाहन्थे - इङ्गल्याण्डको लागि खेल्न र सबै भन्दा राम्रो हुनुहोस् म फुटबलको रूपमा हुन सक्छु। "
प्रसिद्ध भूमि राहद स्टर्लिंगको लागि प्रेरणा को एक महान स्रोत थियो।
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: तिनी अझै जमैकासँग जोड्छन्
स्टर्लिंग भ्रमणहरू हेर्न को लागी जमैका र आफ्ना घरका केटाहरूलाई वफादार तिर्नुहुन्छ जसले कहिल्यै आफ्नो धन कमाउँदैन। नियमित अवसरहरूमा, राहदले हजारौं पाउन्डहरू आफ्ना पुराना पालहरूमा विभाजन गर्यो। यी मित्रहरू थिए जो उसलाई उनको परेशान भएको अतीत मा जान्दथे।
राहेम स्टर्लिंग उत्पत्ति- आफ्ना जमैकन मित्रहरूसँग कुराकानी गर्दै
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: कानूनी मुद्दाहरु
8 अगस्ट 2013 मा, स्टर्लिंग उनको पूर्व प्रेमिका, एक मोडेल मा एक कथित आम आक्रमण को लागि गिरफ्तार गरियो। उहाँले 20 सेप्टेम्बरमा लिभरपूल मजिस्ट्रेट कोर्टमा अपराधीलाई भेट्टाउनुभएन, जब गुनासो निरन्तर प्रमाण पेश गर्न सकेन।
राहेम स्टर्लिंग कानुनी युद्ध
केही महिना अघि, एक एक्सनक्स मा सामान्य आक्रमणको आरोपमा 20 मई 2013 छोडेर परीक्षण गरे पछि दुई साक्षीहरू असफल भएनन् र अभियुक्तले थप प्रमाणपत्र प्रदान गरेनन्। पहिलेको अवस्थामा स्टर्लिंगको कानूनी शुल्क अदालतले भुक्तान गरेको थियो।
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: धूम्रपान गर्ने आदत
अप्रिल 2015 मा, स्टर्लिंग द्वारा फोटोग्राफ गरिएको थियो आइतबार मिरर कथित रूपमा शशि पाइपलाई धुम्रपान गर्दछ र कथित रूपमा आफ्नो नाइट्रस ओक्साइडलाई मनोरञ्जनको उद्देश्यमा निस्क्रिय पार्छ।
Raheem Sterling जीवन शैली - धूम्रपान गर्ने आदत
यो कस्तो प्रबन्धक ब्रेंडन रोर्जर्सले उनलाई भने, "मलाई लाग्छ यो तपाईं केहि गरिरहनु भएको छ, यो जस्तो सरल छ ... युवा खेलाडीहरूले गल्ती गर्छन्। जबसम्म तिनीहरू तिनीहरूबाट सिक्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। "
यो जीवनशैली यसको जस्तै छ मारियो बाल्टोटेल.
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: कार
उहाँसँग बेन्टले GTX 700-4 छ जुन उहाँले 500,000 पाउनुभयो। उनले कार प्राप्त गरे आफ्नो मालिक को समान समान बेंटले को प्रतिलिपि गर्न को लागि।
राहेम स्टर्लिंग बेंटले GTX 700-4
अडी S6 जुन तिनले £ 55,000 को लागि अधिग्रहण गरे। जिपी विन्जरले यस कारमा कुनै पनि समस्याको रेसिंग नहुन सक्छ जुन 0-62mph को सानो 4.4 सेकेन्डमा सक्षम छ। यो उत्तम कार हो भने राईम प्रशिक्षणको लागि ढिलो हुँदै गएको थियो।
राहेम स्टर्लिंगको अडी एसएक्सएनएमएक्स
उनीसँग व्हाइट रेंज रोभर स्पोर्ट छ जुन उहाँले 49,500 पाउनुभयो। 2015 मा उनी पार्किङ टिकटको साथ ड्राइभरलाई हेर्दा अझै पनि यसको ओभरस्क्रीनसँग जोडिएको थियो।
राहेम स्टर्लिंगको रेंज रोवर स्पोर्ट्स
मर्सिडीज C63 जुन उसले प्राप्त गर्यो £ 20,000। स्टेरको गतिशीलता कार बिना कुनै संदेह छ। मर्सिडीज C63 ले चार सेकेण्डमा 0-60mph गर्दछ।
राहेम स्टर्लिंगको मर्सिडीज C63
उहाँसँग स्मार्ट कार छ जुन तिनले 12k को अधिग्रहण गरे। यो एक देश माइल द्वारा उनको सबै भन्दा सानो गाडी हो।
राहेम स्टर्लिंगको स्मार्ट कार
रिपोर्ट अनुसार, स्टर्लिंग हप्ताको हरेक दिन नयाँ कारसँग प्रशिक्षण गर्न मनपर्छ भनेर एक सुन्दर गम्भीर रोटेशन नीति हो।
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: घर
उनले एक पटक पनी 300,000 कटौती गरेका हरिजनको मूल्य उसले बेच्न खोजेको छ, किनकि उनको अनुकूलित निवासले ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न असफल भएको छ।
बर्कडेल, मिर्सीडाइडमा कम से कम व्यापक पुरुषको माथी घर छ, केहि विशेष विशेषताहरु छन् जसमा भान्सामा रातो तल्लाको प्रकाश र एक 'माइकल जैक्सन' कोठा मिनीबार संग पूर्ण छ।
स्टर्लिंग, 21, एकपटक बेच्न खोज्ने के सोचेमा दायाँमोभले कसरी वर्णन गरे "चार-शयन कक्ष अलग घर" लिभरपूल देखि मैनचेस्टर सिटी सम्म £ XNUM मिलियन को लागि स्थानांतरित पछि £ 1.2 मिलियन को लागि।
राहेम स्टर्लिंग जीवन शैली (अगाडिको दृश्य)
Raheem Sterling बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: म्यान सिटी त्रुटि
तथापि, हस्ताक्षरको घोषणाले त्यो बाटो बाहिर काम गर्न सकेन। पहिलो, त्यहाँ थियो (व्यापक) £ 49m शुल्क को मजाक। त्यसपछि त्यहाँ तथ्य थियो तिनीहरूको वेबसाइटले दबावलाई सम्भाल्न सकेन। र त्यसपछि उनीहरूको आधिकारिक चहचहाना फिडमा यो पूर्ण क्ल्यानर थियो। तिनीहरूले आफ्नो नाम सही तरिकाले हिज्जे गरेनन्।
Man City Twitter त्रुटि
स्पष्ट रूपमा ट्वीटर धेरै अरब हेलिकप्टर प्रयोगकर्ताहरू द्वारा गल्तीको रूपमा चिन्ह लगाइएको थियो। यद्यपि, यो पागलपनको अन्त थिएन। त्यसपछि तिनीहरू राहसँग गए:
म्यान सिटी त्रुटि 2
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 6